I-FireStick Set Up - Indlela elula yokuqondisa (ama-5 Mins) - Ungakwenza Kanjani
Imboni yokusakaza isiphenduka indawo yokuncintisana, futhi wonke amabhizinisi azama konke okusemandleni ukukunikeza okuthile okusha nokungcono. Kodwa-ke, sekuphele iminyaka, futhi bekungakabi khona ukufana ne-Firestick TV.Unama-Smart TV amasha asebenza ngokufana nawo, kodwa i-Firestick ingaguqula i-TV yakho yakudala ibe yi-smart TV, futhi yilokho okwenza kube umkhiqizo omuhle.
Ngaphezu kwalokho, iFirestick iyidivayisi esezingeni lokungena ekulethela ukusakazwa okungapheli kokuzijabulisa ngamanani aphansi kakhulu. Ngekhwalithi ezenzakalelayo ye-1080P, akungabazeki ukuthi kungukutshalwa kwemali okufanelekile. Kodwa-ke, abantu abaningi abasazi ngale divayisi emangalisayo. Abanye banombono oyiphutha mayelana nokusethwa kweFirestick.
Ngakho-ke, lo mhlahlandlela uzokusiza ufunde konke odinga ukukwazi nge-Firestick TV:
Yini okunikezwa yi-Firestick?
Ngokuyinhloko, i-Firestick ye-Amazon iguqula i-TV yakho ibe yi-Android Smart TV. U-Ergo, ungalanda izinhlelo zokusebenza ze-Android, ngisho nalezo ‘ezingakhelwanga kahle i-TV,’ futhi uzisebenzise ngaphandle komthungo. Kodwa-ke, kungena esikhundleni sensizakalo yakho ejwayelekile ye-DTH.
Ngakho-ke, i-Amazon ikunikeza izinkulungwane zeziteshi zamahhala ezingavinjelwa noma ezingavinjelwa esifundeni sakho. Uzothola imidiya eminingi ethandwayo, kanye neziteshi ezingaziwa kancane. Izinhlelo zokusebenza ezinjengeNetflix, i-Huli, ne-Amazon Prime Videos nazo zifakwe ngaphambili ku-Firestick TV.
Ngokuya ngesifunda, ungaba nohlelo lokusebenza lokusakaza oludumile ezweni ku-Amazon Firestick. Yilokho okwenza i-Amazon Firestick ibe yithuluzi eliphumelelayo. Ikulethela ipulatifomu ephelele yokuzijabulisa ye-TV nomculo kudivayisi eyodwa, engabizi kakhulu. Konke okudingayo yi-intanethi esheshayo ukufinyelela okuqukethwe kwamahhala nobulungu uma uhlose okuqukethwe kwe-premium.
Yini oyidingayo ukusetha i-Firestick?
I-Amazon Firestick iyidivayisi eqondile esebenza nezidingo ezincane. Noma kunjalo, ukuqinisekisa ukuthi unakho konke, nalu uhlu lwayo yonke into ongayidinga ukusetha i-Firestick ukuze isebenze kahle:
1. I-TV ehambisanayo
Isethi yakho ye-TV kufanele ihambisane ne-HDMI. Ngamanye amagama, kufanele ibe nokukhishwa kwe-HDMI. Uma kungenjalo, ungasebenzisa ama-adaptha (awaziwa nangokuthi ama-converters) ukuxhuma nokukhishwa kwe-RCA ye-TV futhi unikeze nge-HDMI port. Khumbula ukuthi i-Firestick TV ejwayelekile isekela ukuboniswa kwe-1080P, okufanele ilunge. Kodwa-ke, uma uthenge i-Firestick 4K HD, ungahle uthande ukuthenga i-TV ehambisanayo esekela isibonisi se-4K HD.
2.Uxhumano lwe-Inthanethi olusheshayo
I-Firestick ayinayo inketho yokuxhuma ye-Ethernet. Akufiki nokuxhumeka kwe-inthanethi noma. Ngakho-ke, udinga i-Wi-Fi eshesha kakhulu endlini yakho ukuxhuma nedivayisi ye-firestick. Kungcono uma i-Wi-Fi itholakala eduze kwesistimu. Uzodinga okungenani i-2.5Ghz yomkhawulokudonsa ukuze ube nokuxhumeka kokusakaza okungaphazamiseki.
3. I-Akhawunti ye-Amazon
Udinga i-akhawunti ye-Amazon ukwenza ngezifiso i-Firestick bese ungena kuyo. Uma u-ode i-Firestick nge-akhawunti, izoba nemininingwane ye-akhawunti esivele ikhona, kepha ungayisetha kabusha kwi-akhawunti ehlukile uma ufuna. Awudingi ngqo ubulungu obuphambili ukufinyelela i-Firestick TV.
I-Amazon Firestick ngayinye iza ne-USB flash drive (Firestick), ikhebula le-USB, i-adaptha ye-HDMI (ikhebuli) nesilawuli kude. Qiniseka ukuthi unakho konke lokhu ngaphambi kokuqala inqubo yokusetha.
Ungayisetha kanjani i-Firestick?
Ukufakwa kwe-Firestick nokusetha kulula. Luhlobo lwedivayisi olulula lwe- 'plug & play' olwenza ukusetha nokusebenza komoya. Nayi yonke imikhombandlela yesinyathelo ngesinyathelo:
Uma i-TV yakho ingenakho okukhipha i-HDMI, udinga ukwengeza isiguquli bese uyixhuma kwi-adaptha ye-HDMI noma ngqo kuFirestick Flash Drive
Xhuma ikhebula le-USB endaweni ephehla ugesi. Ngenye indlela, uma i-TV yakho isekela indawo ye-USB, inganikeza amandla amakhulu we-Firestick yakho ukuthi asebenze.
Uma usuxhume i-Firestick ku-TV futhi unikezela ngamandla kagesi, izoqala ukukhuphuka.
Inqubo yokusetha nokungena ngemvume:
Lapho uhlelo selunamandla, kuzodingeka ukuthi uyixhume ne-Wi-Fi, ikakhulukazi uma inephasiwedi
Uma usuxhumeke kwisignali ye-Wi-Fi efanele, ungaqala ngenqubo yokungena ngemvume
Uma u-ode nge-ID ebhalisiwe, kungahle kube nakho ukungena ngemvume, ngakho-ke ungakuguqula lokho uma ufuna.
Lapho usungene ngemvume, uzokwazi ukufinyelela i-Amazon Firestick
Viola! Manje, isilawuli kude sisebenza ngokufanayo nezinye izilawuli kude. Ungapheqa iziteshi futhi ufinyelele okuqukethwe kwakho okuthandayo.
Ingabe Kukhona Okubhaliselwe Kwanyanga Zonke?
I-firestick ye-Amazon ayinayo imali yokubhalisa yanyanga zonke, kepha inenqwaba yeziteshi zamahhala ezitholakalayo zokuzijabulisa kwakho. Kodwa-ke, uma ufuna ukufinyelela kuma-Amazon Prime Videos, udinga ubulungu be-Prime.
Ngokufanayo, uma ufuna ukufinyelela kwi-Netflix, i-Hulu, nezinye izinhlelo zokusebenza ze-premium, kufanele ube nokubhaliselwe kwabo. Awukwazi ukufinyelela kuzo uma ungenakho okubhalisile.
Empeleni, iFirestick iguqula i-TV yakho emaphakathi ibe yi-smart TV ngokuyinika ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ezidumile zokusakaza kanye neziteshi ezingenakubalwa. I-DTH umlando manje. I-Firestick nezinye izinketho ziba yingxenye yesikhathi esizayo.
Ngabe i-Firestick iza ne-Alexa?
Isilawuli kude sinemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi esekela umyalo wezwi we-Alexa. Iyafana ne-Echo, futhi ungayixhuma namanye amadivayisi asekhaya ahlakaniphile. Kodwa-ke, ibanga le-mic liphansi, futhi kuzofanele ukhulume nerimothi ukulawula i-Alexa. Kuyisici esikahle.
Yini Eyenza I-Firestick Ingcono Kunamanye Amadivayisi Okusakaza?
Kukhona ezinye izinketho ezifana neRoku ne-Apple TV etholakalayo ukuze ithengwe. Kodwa-ke, lezo yipulatifomu ekhethekile enokufinyelela okunomkhawulo kuzinhlelo zokusebenza nezinkundla eziningi. I-Amazon Firestick isebenza kusistimu yokusebenza evulekile, i-android. Ngakho-ke, iguqula i-TV yakho ejwayelekile ibe yi-smart TV.
I-Amazon Firestick iza ne-Prime Videos ne-Prime Music. Noma kunjalo, isakuvumela ukulanda ezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza. Ungayisebenzisa njengefoni yakho ye-Android futhi ungalanda nezinhlelo zokusebenza ezingagadiwe ezingatholakali esitolo esisemthethweni se-Amazon.
Lokhu kuvumelana nezimo kwenza i-Amazon Firestick ibe yipulatifomu eheha kakhulu kunababencintisana nayo. Ungalanda ngisho ne-VPN ukuthuthukisa ukuphepha kwe-Firestick yakho ne-inthanethi.
Ngalesi siqondisi sokusetha esilula, ungasetha i-Firestick ngokushesha. Landela le nqubo, futhi ungakwenza kungakapheli imizuzu embalwa. Ukusetha isibani somlilo akunzima kangako njengoba ucabanga. Uma unemibuzo ephathelene nenqubo yokusetha usazise.shiya izimpendulo zakho esigabeni sokuphawula.
Amawebhusayithi Okusakazwa Kwama-Movie ku-Inthanethi
I-Disney Speedstorm, umdlalo wokugijima wamahhala, umenyezelwe ngabakwaGameloft!